Shiinaha 19 inji kaydinta tamarta 48V lithium ion baytar 100Ah oo loogu talagalay saldhigga isgaarsiinta Soo saaraha iyo Badeecada | LIAO
19 inji kaydinta tamarta 48V lithium ion batari 100Ah saldhigga telecom
1. Awood sare 19 inch rack sii kordhaya 48V 100Ah batari lithium saldhig saldhig isgaarsiineed.
2. Kiiska birta ah ee gacanta lagu hayo oo la beddelo.
Qaabka Lambar Rebak-F48100T
Awoodda magaceed 48V
Awoodda magaca 100Ah
Ugu badnaan lacag joogto ah 60A
Ugu badnaan dheecaan joogto ah 60A
Miisaanka Qiyaastii 55kg
Cabbir 540mm * 440mm * 133mm
Codsiga Si gaar ah loogu talagalay saldhigga isgaarsiinta saldhigga, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa tamarta Awoodda, qoraxda＆nidaamyada dabaysha, keydinta tamarta guriga, UPS, ECT.
3. Iyada oo tilmaame SOC ah uu ku yaal qeybta hore iyo moduleka xaddidan ee xaddidan.
4. Shaqada isgaarsiinta ee RS232 ama RS485 waa ikhtiyaari.
5. Nolosha wareegga dheer: In ka badan 2000 jeer nolosha wareega oo 7 jeer ka mid ah baytariga aashitada leedhka.
6. Badbaadinta sare: LiFePO4 teknolojiyaddu waa nooca batari lithium-ka ugu ammaansan ee laga aqoonsan yahay warshadaha xilligan.
7. Awoodda cagaaran: Ma laha wax jiidista deegaanka.
Saldhigga Isgaarsiinta Hordhac
Awood isgaarsiinta waa qeyb muhiim ah oo ka mid ah nidaamka isgaarsiinta oo dhan. Sida wadnaha jirka bini'aadamka, tayada korantada iyo isku halaynta qalabka korontada si toos ah ayey saameyn ugu yeelan doontaa dhamaan nidaamka isgaarsiinta iyo tayadiisa.
Nidaamka tamarta (Nidaamka Awoodda) wuxuu ka kooban yahay qalabka hagaajinta, qalabka tooska ah ee hadda loo qaybiyo awoodda, xirmooyinka batteriga, Beddelayaasha DC, qalabka korontada, iwm iyo khadadka qaybinta awoodda la xiriira. Nidaamka korontadu wuxuu siiyaa sahay kala duwan oo sare iyo mid hooseeya AC iyo DC qalabka korantada ee kaladuwan si loo ilaaliyo habsami u socodka nidaamka mootada.
Saldhigga isgaarsiinta ayaa ah kaabayaasha ugu muhiimsan ee shabakadda isgaarsiinta moobiilka. Qolka saldhigga isgaarsiinta moobiilka, fiilooyinka, muraayadaha dhaadheer iyo qeybaha kale ee qaabdhismeedka, kuwaas oo qolka saldhigga saldhiggu inta badan ku qalabeysan yahay aaladaha gudbiya, qalabka kormeerka, aaladaha dabka lagu demiyo, qalabka korontada keena iyo qalabka qaboojiyaha, iyo baararka dhaadheer oo ay ku jiraan dhulka hillaaca ilaalinta nidaamka, dhismaha munaaradda, aasaaska, iyo taageerada, Fiilooyinka iyo xarumaha kaabayaasha iyo qaybaha kale ee dhismaha.
Hore: Hot yareynta miisaanka fudud ee filimka 48V 20Ah LiFePO4 xirmada batteriga ee nidaamka calaamadaha
Xiga: Iibka kulul 19 inch racking sii kordhaya UPS batari 48V 40Ah lithium ion batari
Si baaxad leh u shaqeynaya heerkulka baakadka batroolka 12V 60Ah lithium ee nidaamka kormeerka khadka tooska ah
Iibinta kulul kiishka macdan 488 40Ah lithium batari nidaamka kaydinta tamarta
Hot yareynta miisaanka fudud ee filimka 48V 20Ah LiFePO4 xirmada batteriga ee nidaamka calaamadaha
Iibka kulul 19 inch racking sii kordhaya UPS batari 48V 40Ah lithium ion batari
Cabbir yar oo miisaan fudud 6V 10Ah Lifepo4 baakidh batari ah oo leh BMS ku dhex jira
2000 + wareegga nolosha macdanta macdanta 12V 12Ah LiFePO4 ee nidaamka nalalka